» ‘जस जसको ग’ठबन्धन बने प’नि एमाले ए’क्लै ल’ड्छ’: ओली ‘जस जसको ग’ठबन्धन बने प’नि एमाले ए’क्लै ल’ड्छ’: ओली – हाम्रो खबर
‘जस जसको ग’ठबन्धन बने प’नि एमाले ए’क्लै ल’ड्छ’: ओली
काठमाडौं ।एमाले अ’ध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आगामी निर्वाचनमा एमालेविरुद्ध जसजसको गठबन्धन भए पनि एक्लै लड्ने बताएका छन्। उनले चुनावमा कुनै पनि पार्टीले एमालेसँग एक्लै लड्न नसक्ने बताए। सबै जोड्दा पनि एमालेको कम्मरकम्मर मात्रै आउने दाबी उनले गरे।
ललितपुरको लुभुमा आयोजित यु’वा सं’घको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अ’ध्यक्ष ओलीले भने, ‘एमालेसँग एक्लै लड्न सकिन्न भन्ने सबैलाई थाहा छ, कसैले नचिताए हुन्छ। एकएक दर्जन मान्छे भएका १० पार्टी मिल्दा कति हुन्छ ? १० दर्जन नै त भए होला नि होइन ? अरू सबै जोड्दा पनि एमालेको कम्मरकम्मर मात्रै आउने हुन्।’
अध्यक्ष ओलीले अबको चुनावमा एमालेको कसैसँग प्रतिस्पर्धा नहुने बताए। ‘एमालेबाट को उम्मेदवार बन्छ, अहिले थाहा छैन तर जो उठे पनि जित्छ,’ उनले भने। नेता नेपाललाई कटाक्ष गर्दै ओलीले पार्टीमा कुनै वि’भाजन न’आएको तर पा’र्टीबाट केही पातपतिंगर झरेर गएको बताए। दुईचारवटा पात झरेर रूखलाई कुनै क्षति नपुग्ने भन्दै उनले न’याँ दल’मा जा’नेहरूप्रति व्यंग्य गरे।
एमालेसँग असंख्य नेता’कार्यकर्ता भ’एको उल्लेख गर्दै उनले देशलाई अगाडि बढाउने ए’कताबद्ध पार्टी एमाले नै भएको जिकिर गरे। अबको चुनावबाट झलमल्ल सूर्य उदाउने पनि ओलीले बताए। उनले अहंकार नर्क जाने बाटो भएकाले शा’लीन भएर प्रस्तुत हुन नेता–कार्यकर्तालाई निर्देशन दिए। एमालेको विभाजनलाई उनले फुटेको नभई चोइटिएको संज्ञा दिए।- यो समाचार नागरिक न्युजमा प्रकाशित छ ।